Wimens Swimwear |
Swimsuits mahafinaritra amin'ny morontsiraka ho an'ny vehivavy miaraka amin'ny pad azo esorina
Ny akanjo mafana roa misy akanjo lava natokana ho an'ny volon'ondry dia namboarina tamim-pahakingana mba ho tsara tarehy miaraka amin'ny tsipika malefaka, ny antsipiriany namboarina dia mendri-piderana manokana, mahatonga ny akanjo akanjo ho mpiara-miombon'antoka mahafinaritra amin'ny morontsiraka amin'ity vanim-potoana ity sy amin'ny vanim-potoana ho avy ~!
Fomba fanao ambony voapaika ambony ambany Womens, akanjo ba fandroana bikinizy roa
Polyester & Spandex Fabric, akanjo malefaka milomano malefaka malefaka, tonga lafatra toy ny bikini tropikaly, akanjo milomano, akanjo ambony eny amoron-dranomasina
36.5-45.5 malefaka malefaka malefaka modely malefaka ″ Monokini ho an'ny vehivavy
Volom-borona roa voafefy avo volo monokini ho an'ny vehivavy vita amin'ny kalitao avo lenta, vita amin'ny lamba malefaka sy malama. Ity lamba akanjo fandroana ity dia misy fatra tsara sy ahazoana aina kokoa. Ity paty ity dia manapaka monokini akanjo milomano iray manome anao mpanohana bebe kokoa, manosika tsara tratra, pads azo esorina. Akanjo milomano misy akanjo lava milahatra feno, tsy hahita rehefa mando! Akanjo filomanosana iray lava volo, manome rakotra feno, sady manasongadina ny endrikao ary mamela ny hoditrao hamirapiratra!
Sexy V vozony eo an-tampon-tsoroka mamatotra sombin-doko Bikini vehivavy iray
Composition material: Ny lamba an'ity akanjo akanjo tankini ity dia vita amin'ny polyester 82% sy spandex 18%. Ny lamba mivelatra dia mateza sy marefo.
Malalaka avo voapaika tongotra Cheeky seza fandrakofana akanjo iray fandroana akanjo ho an'ny vehivavy
Famoronana tsy misy lamosina miverina miverina;
–Fifidianana loko maro: loko matevina sy pirinty biby;
–Ny fitaovana vita amin'ny lamba malama dia ahazoana aina sy elastika kokoa;
– Akanjo lava fandroana ho an'ny vehivavy, vehivavy akanjo ba leoparda;
–Care: Torohevitra fanasan-tanana, tsy misy paoka, vy ambany.
Tongotra tapaka, fipetrahana amin'ny seza lava volo, manome endrika anao ho mahafinaritra sy mahafinaritra kokoa.
–Ity bikini ity dia misy kaopy ao anatiny, azonao esorina arakaraka ny toe-javatra iainanao manokana.